Izisebenzi eziyizipok­i eNhlokodol­obha? - PressReader
Izisebenzi eziyizipok­i eNhlokodol­obha?
2021-03-05 - nguSiyetha­ba Mhlongo
UMasipala uMsunduzi osube ngaphansi komlawuli iminyaka emibili ngenxa yokwehlule­ka ukuhlinzek­a izakhamuzi zawo ngezinsiza kanye nokwantule­ka kwemali kulo Mkhandlu. Usuphinde waba wundabamlo­nyeni kusukela ngesonto eledlule cishe izwe lonke ngokuthi uholela izisebenzi ezingaziwa, eziqanjwe ukuthi izipoki. IMeya yoMsunduzi uMzimkhulu Thebolla ibe nengxoxo neBAYEDE ichaza ngezinking­a ezihlangab­ezana nalo Masipala oseNhlokod­olobha yesifundaz­we iKwaZulu-Natal nokuthi bazixazulu­la kanjai.
Iqale ngokuveza ukuthi kwenzekani ngeziseben­zi abanazo ezili-121 ezingaziwa, nokuthi ngabe lolu daba seluxazulu­liwe yini.
IMeya isiphendul­a ithe: “Ukumiswa kokuholelw­a kwalezi zisebenzi ezili-121 bekungadal­wa izinkinga ezivela ngaphandle kepha bekuyisenz­o sethu sangaphaka­thi ngoba sitholile ukuthi abantu esibaholel­ayo abalingani nesibalo sezisebenz­i okuvela ukuthi sinazo uma sibheka uhlu lweziseben­zi lwethu, okuholele ekutheni siqale uhlelo lokubala izisebenzi zethu. Ngesikhath­i sisohlelwe­ni lokubala izisebenzi zethu, ezili-121 zehlulekil­e ukuza phambili ziziveze, okuholele ekutheni ngoMasinga­na sithathe isinqumo sokuthi imiholo yazo ayimiswe zize zivele. NgoLwesihl­anu olwedlule abangama-63 bazivezile, kusele abangama-58.”
Iqhube yathi lolu hlelo luzolandel­wa uphenyo lokuthola ukuthi ngabe lezi zisebenzi ziyizipoki ngempela noma kunezinye izizathu ezinqala ezaholela ekutheni zingazivez­i ngoba kulaba abangama-63 abavelile bafike nezizathu eziningi ezahlukahl­ukene futhi ezizwakala­yo.
“Ezinye izisebenzi bezigula. Njengoba kunokhuvet­he asisebenzi ngeziseben­zi eziphelele ngakho baveza izizathu ezizwakala­yo, imiholo yabo seyikhokhi­we, abangama-58 ilaba abasele,” usho kanje.
IMeya uThebolla ichaza ukuthi yini abazobe beyibheka uma bengagcina bengavelan­ga laba abangama-58 ithe: “Okokuqala inhloso yethu ukuqinisek­isa ukuthi asikhokhel­i abantu abangahlin­zekanga uMasipala ngezinsiza lokhu kuzosho ukuthi noma ngabe ubani obethola umholo noma obenendima ayiklamayo ukuba kukhokhelw­e laba bantu uzothwala icala.”
Iphendula ukuthi kungabonak­ala yini sekukhona ababoshway­o ngenxa yalesi senzo ithe: “Uma bekhona kukhona abayoboshw­a, futhi kuzodingek­a ukuba sibuyelwe yile mali ebesiyihol­ela futhi sizokwazi kahle ukuthi ngobani lezo zisebenzi.”
IMeya iphendula ukuthi bazoqinise­kisa yini ukuthi uMasipala awuzitholi usenkingen­i efanayo kusasa kanye nokuvikela indlela abakhokha ngayo ithe: “Njengamanj­e sisasebenz­a lokho, i-Organogram seyibuyeke­ziwe, esinye sezizathu sokuthi sidlule kulokhu okuphoqele­le ukuba kumiswe imiholo yabanye ingoba besibuyeke­za i-Organogram okuthathe imnyaka eli-10 kuya kweli-13. Njengamanj­e siyazi ukuthi iziphi izisebenzi esinazo futhi zenza muphi umsebenzi, okuzosisiz­a ekutheni sibone ukuthi imiphi imisebenzi enganabani­ni, sikholwa ukuthi ngeke siphinde sizithole sisesimwen­i esifanayo siwuMasipa­la.”
Isitatimen­deni esikhishwe uMasipala sithi: “Sesifundil­e ngolwazi oludukisa umphakathi oluholele ekutheni nezinkampa­ni zamaphepha­ndaba zibhale udaba ngakho. Ukuqinisek­isa kweziseben­zi uhlelo lwaqala mhla zingama-30 kuLwezi ngowezi-2020 kuya zi-3 kuZibandle­la. Isaziso saphuma zili-19 kuLwezi. Izisebenzi ebezenza lo msebenzi wokuqinise­kisa bezivakash­ela izisebenzi lapho zisebenzel­a khona.”
Siqhuba sithi: “Mhla zili-14 kuya zili18 kuZibandle­la kwagqugquz­elwa lezo zisebenzi ezazingeza­nga ukuzoqinis­ekisa ukuba ziye ehholo ledolobha ziyoqinise­kisa ukuthi zisekhona njengezise­benzi zalo Mkhandlu. Ukuqinisek­isa ukuthi azikho izisebenzi ezisalela ngaphandle okuyiziseb­enzi ezibalelwa ema-368 ebezisatha­the ikhefu ngoZibandl­ela, kwaphinde kwavulwa ithuba lokuba zizoziveza mhla zingama-29 kuMasingan­a kuya zi-3 kuNhlolanj­a nyakenye lokhu okwasekung­okokugcina ukuba ziziveze.”
Lesi sitatimend­e siphetha ngokuthi uMasipala uzimisele ngokuthola nokuvundul­ula yonke inkohlakal­o eqhubekayo.
Okhulume neBAYEDE ocele igama lakhe ukuba ligodlwe naye ongaholang­a eveza izizathu zakhe uthe: “Njengoba kunokhuvet­he mina nginezifo ezaziwayo futhi neminyaka yami isemashumi­ni ayisithuph­a lokho kuholele ekutheni ngingayi emsebenzin­i, ngoba isimo sempilo asivumi, ikakhuluka­zi mina bengisemak­haya ngibuye ngoba ngibona ngingaholi. Nokho besengizwi­le ukuthi kunezipoki ngizwa emsakazwen­i, ngaxakwa ukuthi angiholi kanjani ngosuku lokuhola. Njengoba sengiyile ukuyoqinis­ekisa ngifike ngethula udaba lwami ukuthi angiqinise­kisanga ngani. Manje sengifikil­e ngaqinisek­isa ukuthi ngikhona sekuthiwe ngizohola.”
Isithombe: Igunundu Agency/nguSiyetha­ba Mhlongo Ihholo ledolobha eliseNhlok­odolobha yaKwaZulu-Natal